Aan Dareemo Garsoorka Nacfiga ah
Qoraalkaan waxaa markii hore lagu daabacay wargeys ka soo baxa Xarunta loogu talagalay "Philanthropy Effectra" oo loo yaqaan "Tilmaamaha Maamulaha ee mustaqbalka Philanthropy. "
Mustaqbalka Philanthropy wuxuu sharxaad ka bixiyaa "ficilada wax ku oolka ah" ee deeqaha, sida bixinta taageerada guud ee mudada dheer socota, oo bixisa daahfurnaan weyn, iyo barashada dadka qaata. La isku raacay. Laakiin hadda, faa'iidooyinka ficilladani waxay naqaanaan inta badan naga mahadnaqa sahaminta fikirka ah ee aan ku arkay guud ahaan bulshada aasaasiga ah.
Jawaabtaan, waxaan doorbidaa inaan diirada saaro hal aag oo aasaas u ah aasaasaha shirkadaha madaxa banana "ma yahiin wax yar" sababtoo ah, feker ahaanteyda, inta badan ma caqli galin hogaaminta aasaasiga ah: maalgashadeena. Dhab ahaantii, waxaan rumeysanahay in dakhliyadayadu ay bixiyaan ballanqaad si weyn u kordhinaya saameynteena wada jirka ah ee ku saabsan arrimaha la xidhiidha arrimaha la xidhiidha daraasadda, oo ay ku jirto sinnaan la'aanta iyo isbedelka cimilada.
Haddii aan rabno in aan sare u qaadno saameynta aan ku yeelanno, waa waqtigii lagu siin lahaa miisaan siman oo ku saabsan waajibaadkayaga aasaasiga ah ee u hoggaansamidda ujeeddada howlaha samafalka.
Mid ka mid ah fursadaha aan loo dulqaadan karin waa in loo wareejiyo faham isku-dhafan oo ku saabsan waxa loola jeedo inuu noqdo hanti-haye ku-deeqsinimo. Inta badan ma ahan, waajibaadka ra'yiga waxaa lagu aasaasay guddi aasaasi ah iyo hoggaamiyeyaasha shaqaalaha keliya marka la eego ilaalinta shuruudaha sharciga ah iyo ilaalinta deeqda aasaasiga ah. Laakiin ka fekerista suuqa iyo xeerarka aasaasiga ah ayaa isbedelaya.
Haddii aan rabno in aan sare u qaadno saameynta aan ku yeelanno, waa waqtigii lagu siin lahaa miisaan siman oo ku saabsan waajibaadkayaga aasaasiga ah ee u hoggaansamidda ujeeddada howlaha samafalka. Maaddaama ay tahay hay'ad madax-furasho ah, waxaan ku dhaaranneynaa doorka aan u heysano mulkiilayaasha hay'adaheena maaliyadeed oo ay weheliyaan kaalinteena dhaqameed ee ah deeq-bixiyeyaasha. Waxaan tixgelineynaa isticmaalka dhammaan khayraadkeena si aan u hormarino howlaha iyo lacagta dadweynaha, halkii ay ka ahayd boqolkiiba shan lacagta loo baahan yahay ee ujeedada samafalka.
Sameynta isbedelkani wuxuu u dhexeeyaa dowlad-goboleed. Waxay u baahan tahay faham wadaag ah iyo ballanqaadyo guddiga maamulka iyo sidoo kale hoggaanka shaqaalaha. Beddelka noocan oo kale ah wuxuu u oggolaanayaa aasaas si loo sahamiyo qaabab badan oo dheeraad ah iyo qalab kor u qaadaya naatiijadayada. Si kastaba ha noqotee, isbedelka aasaasiga ah, si kastaba ha ahaatee, beertayadu waxay xaddidaysaa nafteena ujeeda suuqa, halkii ay ka fiicnaan lahayd awooddeena si ay saameyn ugu yeeshaan suuqyada faa'iidada dadweynaha.
Hantid badan ayaa leh ujeedo ah in la kordhiyo soo celinta lacageed si ay u buuxiyaan shuruudaha deeq-lacageedka, sii wadaan awoodda wax iibsiga waqti-dheer, oo ay ku jirto joogtayn. Guddiyada maalgashiga, guddiyada maalgashiga, iyo agaasimaha guud waxay ku shaqeeyaan mustaqbalka maalgashiga caadiga ah, taas oo ah tixgelinta deegaanka, habdhaqanka, iyo xukunka (ESG) ay ka dhigan tahay "caqabado" taas oo keenaysa soo noqoshada dhaqaale ee hooseeya iyo / ama halis dheeraad ah oo khatar ah. Sidaa darteed, waxay haystaan silecyo waxyeello u dhexeeya dhinaca maalgashiga guriga iyo inta kale ee aasaasiga ah.
Hase yeeshee, caddaynta sii kordheysa ee caddayntu, waxay taageertaa mulkiilaha aanad u baahnayn inaad ku bixiso lacag celin lacageed-oo laga yaabo inuu kobciyo oo lagu daray ESG. Qaar badan oo ka mid ah maalgashatada hay'adaha waaweyn sida caymiska hawlgabka, shirkadaha caymiska, iyo maareeyayaasha hantida waxay tixgelinayaan macquul iyo feejignaan si ay u tixgeliyaan arrimaha muhiimka ah ee ESG kuwaas oo ka dhigaya khatar wax ku ool ah oo khatar galinaya portfolio, iyo sidoo kale fursadaha ESG ee la kulmi kara ama ka badan kara soo celinta lacageed. Sababtoo ah aasaaska ayaa leh faa'idada dheeriga ah ee la xiriirta howlaha safarka.
Bishii Sebtembar 2015, IRS waxay sii daayeen hagid taasoo xaqiijinaysa awoodda aasaasiga ah ee "tixgelinta xiriirka ka dhaxeeya maalgelin gaar ah iyo ujeeddada samafalka ee aasaaska" ilaa iyo inta daryeelka ganacsiga caadiga ah iyo miyir-qabka la isticmaalo oo la diiwaangeliyo. Tani waxay soo saari doontaa caqabad kale oo badanaa oo lagu tilmaamay hoggaan aasaasi ah si loo dhimo silello u dhexeeya hawsha iyo hawlahooda maalgashiga.
Waxaan tixgelineynaa isticmaalka dhammaan khayraadkeena si aan u hormarino howlaha iyo lacagta dadweynaha, halkii ay ka ahayd boqolkiiba shan lacagta loo baahan yahay ee ujeedada samafalka.
Lacagta aasaasiga ah ee aasaasiga ah ayaa ku socota saamaynta maalgashiga. Sida tirada sii kordhaysa ee asxaabteena ah, McKnight Foundation waxay aqoonsadeen qayb ka mid ah danteennadayada loogu talagalay maalgashiga taageerada. Saameyntan oo ah maalgelinta "soo saarida," waxaynu dooneynaa celin dhaqaale oo la barbardhigi karo maalgashiga caadiga ah ee isku mid ah hantida, iyada oo la barbar dhigta bulshada / deegaanka iyo barashada barnaamijka. Marka aan maraakiibtaas u dirno, in badan oo ka mid ah caasimadeena xooggan ayaa la jaanqaadaya hawlgalkeenna. Ka qayb qaadashadan suuq-geynta ah waxay naga dhigeysaa mid waxtar leh dhammaan hawlahayaga oo waxaan kordhinnaa saameynta aan ku yeelan karno.
Markuu sidan u sheegay, adoo diiradda saaraya qalabka maalgashiga, McKnight wali wuu ka tagay miiska. Waxay ahayd markii aan diiradda saarnay aqoonsigeena asaga oo ah maalgeliye hay'adeed oo aan ku bilawnay inaanu kobcinno awooda qarashka oo dhan. "Ka qaybqaadashada Maalgashadayaasha" waa ikhtiyaarka aan xitaa lagu xusin warbixinta. Hase yeeshee, saldhig kasta wuxuu ka ciyaari karaa kaalin aad u xoogan oo xiran koofiyadaha maal-gashaday hay'ad-aan xitaa dhaqaajin hal doolar!
Macaamiisha lacagta bixiya ee badeecooyin iyo adeegyo maaliyadeed, guddiga maalgashadeenu waxay hadda weydiinayaan dhammaan maamulayaasha dhaqaalaha ee dibadda ku saabsan hababka ESG. Tan iyo markii aan bilownay, waxaynu aragnay isbeddel muhiim ah oo ku saabsan wacyiga iyo qabashada tixgelinta ESG ee maamulayaasha. McKnight wuxuu bixiyay maalgashiga abuurka ee maamulaha hadda jira si loo soo saaro wax cusub oo tayo sare leh oo hay'ad ESG ah. Waxaanu ku biiraynaa maalgashadayaasha kale (ma aha oo keliya aasaaska, laakiin sidoo kale lacagaha hawlgabka ee weyn, shirkadaha caymiska, maamulayaasha hantida, iyo wixii la mid ah) codbixinta wakiilada iyo saamileyda saamilayda ah sababtoo ah waxaan nahay milkiilihii shirkadaha ganacsiga ah. Waxaanan isticmaaleynaa codkayaga US Securities iyo Exchange Exchange iyo kuwa kale ee xawaaladaha suuqa ah si ay u dhisaan suuqyo caafimaad leh iyo kuwo dheer.
Ma aha istaraatiijiyad maalgashi oo macno samaynaysa aasaas walba. Si kastaba ha ahaatee, waxaan soo jeedinayaa inaan ka gudubno oo aan ka hadalno kaliya qalabka maal-gashiga oo aan eegno fursadda weyn ee aan u dejinno aasaasaheena si aan u hagaajino dhammaan kheyraadkeena si aan u horumarino hawlgalkeenna. Iyada oo la kaashanayo kaalinteena sida deeq bixiyeyaasha, shirarka, iyo wada-shaqeeyayaasha, aan u aqoonsanno aqoonsigeena maalgashadayaasha hay'adaha. Tani waxay ujeedadeedu u saamaxaysaa aasaaska inay saameyn ku yeeshaan suuqyada suuqyada siyaabaha horey u soo mariya faa'idada dadwaynaha iyo in ay wax ka qabtaan arimaha saxda ah ee natiijooyinka socda.